धोका दिने श्रीमानलाई देखाउन कै लागि भएपनि अर्को विवाह गर्छु ! - समृद्ध नेपाल
म निजी विद्यालयमा शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माविमा पढाउनुहुन्थ्यो । दुई छोरा छोरी । काठमाडौंमा एउटा पुस्तैनी घर । हाम्रो भागमा बस्नलाई तीन कोठा । हामीलाई पर्याप्त थियो । घरभाडा तिर्नु नपर्ने भएकाले दुई बूढाबूढीको कमाइ एकदिन श्रीमानले के के सुनेर आउनुभयो अनायास नै राति इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो ।
त्यो दिनदेखि त सधैजसो इजरायलका बारेमा केही न केही नयाँ कुरा ल्याएर मलाई सुनाउन थाल्नुभयो । एकदिन मैले झर्को मान्दै भनें हामी लाई के काम इजरायलको गफ । नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु । किन र तिमी पनि जाऊ न इजरायल । अब त केटाकेटी पनि ठूला हुँदै गए भोलि उच्च शिक्षाका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । हाम्रो कमाइ थोरै छ होइन बरू म यहाँ केटाकेटी स्याहारेर बस्छु, हाम्रो पनि आथिर्क हैसियत अलि उकालौं । सधै यही तीन कोठामा जिन्दगी बिताउने ?
सुहाना थापाले अनमोल सँग लगन गाठो कस्दै !
जति माँझ्दा पनि दाँत पहेँलो देखिन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् !
चीन–अमेरिकाबीच सहकार्य आवश्यक : जो बाइडन
उदयपुरको व्यापार संघकै अध्यक्षको धारा काटियो ! कारण यस्तो
मृत्युशैयामा पुगेकी तामाङलाई बचाउँन डा.शर्माले गरे निःशुल्क उपचार !
अस्पतालमा बच्चा जन्माउने क्रममा बच्चाको टाउको डा’क्टरको हा’तमा, शरीर ग’र्भमै छु’ट्यो!